Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny marary na ny maratra dia mijanona ho ahiahin'ireo mpizahatany mitsangantsangana
Ny fanadihadiana natao isan-taona momba ny fitsangantsanganana an-tsambo vaovao ho an'ny 2,072 amerikana dia nanambara fa ny marary na ny maratra alohan'ny na mandritra ny fitsangantsanganana dia mijanona ho ahiahin'ireo mpandeha hatrany. Ny olana mifandraika amin'ny fahasalamana dia nitarika ny ankamaroan'ny fiantoham-piantohana fitsangatsanganana amin'ny fitsangatsanganana an-tsambo.
Ny marary na ny maratra no tena mampanahy
Ny mpitsangatsangana dia miahiahy indrindra amin'ny aretina na ratra misy fiantraikany amin'ny dia arahin'ny toetr'andro ratsy ary tsy hita ny fiaingan'ny sambo.
43.1% Marary na maratra alohan'ny na mandritra ny fitsangantsanganana an-tsambo
39.8% Toetr'andro ratsy
17.1% Tsy hita ny dia fitaterana an-tsambo
Ny marary na ny maratra alohan'ny na mandritra ny fitsangantsanganana an-tsambo dia fantatra ihany koa fa ny ahiahy voalohany tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taon-dasa. Ary koa, sahabo ho iray amin'ny efatra amin'ireo valinteny efatra no niaina hazan-dranomasina nandritra ny dia nataony.
Mitohy manjaka ny Karaiba
Iray amin'ny efatra no nisafidy ny Karaiba (26 isan-jato) ho toerana fitsangantsanganana ankafizinao, arahin'ny Alaska (15 isan-jato). Enina isan-jato no nifidy an'i Italia ho toerana voalohany hitsidihana.
Ny tantsambo dia aleony ny fifanarahana toy izay ny haitao farany
Raha ny vaovao momba ny fitsangantsanganana an-tsambo dia ny fifampiraharahana ho avy no mahafinaritra indrindra arahin'ireo zotra fitsangatsanganana an-tseranana.
58.1% ny fifanarahana fitsangantsanganana an-tsambo
27.7% kokoa ny fotoana any amin'ny seranana, kely kokoa any an-dranomasina
9.9% nohavaozina WiFi amin'ny sambo
4.3% serivisy VIP vaovao ho an'ny vahiny suite
Ny fanafoanana ny dia sy ny olana ara-pahasalamana dia voalaza fa:
• Fitsaboana ilaina mandritra ny fitsangantsanganana an-tsambo
• Nisy olana ara-pahasalamana nanery ny fanafoanana ny dia
• Ny andro ratsy dia nanery ny fanemorana na fanafoanana ny fitsangantsanganana an-tsambo
• Ny sidina tsy nahomby dia nahatonga ny fahatarana na ny fanafoanana ny fitsangantsanganana an-tsambo
• Nangalatra na very ny entana nandritra ny dia